Toronto mankany Argyle dia vaovao tsara ho an'i St.Vincent sy ny Indostrian'ny Fizahan-tany Grenadines
Home » Vaovaon'ny seranam-piaramanidina » Toronto mankany Argyle dia vaovao tsara ho an'i St.Vincent sy ny Indostrian'ny Fizahan-tany Grenadines
Ny St.Vincent sy ny Grenadines Tourism Authority (SVGTA) dia nankasitraka ny fanapahan-kevitry ny Air Canada hampiakatra ny serivisy ary hanolotra sidina tsy miato Air Canada Rouge mandavantaona avy amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenenan'i Pearson any amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Argyle.
Ny sidina Alakamisy isan-kerinandro dia hiverina amin'ny 25 Oktobra 2018, ary hitohy mandritra ny taona. Ny sidina faharoa isan-kerinandro dia hiasa amin'ny alahady mandritra ny vanim-potoana fitsangatsanganana ririnina, eo anelanelan'ny 16 Desambra 2018 sy 28 aprily 2019.
"Ny Air Canada dia faly manolotra tolotra mihamitombo sy serivisy mandavantaona ho an'i St.Vincent sy Grenadines manomboka amin'ity ririnina ity. Ny fanapaha-kevitray dia mifototra amin'ny fahombiazan'ny zotram-pifandraisana tamin'iny nandefasana azy iny tamin'ny taon-dasa ary rehareha fa izahay no mpitatitra amerikana avaratra voalohany nanompo ireo nosy, ”hoy i Mark Galardo, filoha lefitra, Network Planning, Air Canada.
Ity no taona faharoa nanoloran'ny seranam-piaramanidina sidina tsy miato hatramin'ny nanokafana ny Seranam-piaramanidina Iraisampirenena Argyle ny volana feb 2017, ary ny fanomezana voalohany indrindra mandehandeha isan-taona ho an'ireo mpandeha kanadiana. Ireo sidina ireo dia efa azo amidy amin'ny alàlan'ny www.aircanada.com na amin'ny alàlan'ny masoivoho mpandehandeha tianao.
"Faly be izahay fa manana mpiara-miasa fanta-daza ao amin'ny Air Canada Rouge amin'ny sidina tsy miato mandritra ny taona," hoy i Glen Beache, tale jeneralin'ny SVGTA. "Tamin'ny fanokafana ny Seranam-piaramanidina Iraisampirenena Argyle tamin'ny herintaona, ary manolotra sidina mandavantaona mandavantaona hiala an'i Toronto izahay, dia manantena ny handray ireo mpandeha kanadiana maro kokoa ho any St.Vincent sy The Grenadines."
Ny SVGTA dia hampiantrano andiana Road Shows amin'ny faran'ity volana ity any Canada, hanomezana fampahalalana bebe kokoa momba ny sidina ary koa ny hetsika sy ny toeram-ponenana. Ny Road Shows any Canada no ho laharana fahatelo amin'ny “DiscoverSVG” Road Shows izay tanterahina amin'ireo tsena loharanom-pizahan-tany.
Amin'izao fotoana izao ny delegasiona iray avy amin'ny SVGTA izay tarihan'ny Tale Jeneralin'ny Fahefana Glen Beache dia ao amin'ny United Kingdom amin'izao fotoana izao ho an'ny Road Shows amin'io tsena io. Ahitana ny filohan'ny filankevi-pitantanana Bianca Porter, ny tompon'andraikitra amin'ny varotra Natasha Anderson ary Jamali Jack ary ny solontena avy amin'ny hotely eto an-toerana. Nanatevin-daharana an'i Barbara Mercury sy Gracita Allert ao amin'ny SVG London Tourist Office izy ireo, ho an'ny hetsika miaraka amin'ireo mpiasa mpivarotra dia any London, Brighton ary Birmingham.
Ny DiscoverSVG Road Shows dia hitohy amin'ny 24 septambrath hatramin'ny Septambra 28th any Canada izay hisy hetsika hatao any Niagara-on-the-Lake, Oakville, Kingston, Ottawa ary Montreal. Ny legiona USA an'ny Road Show dia hanomboka amin'ny 1 Oktobrast hatramin'ny 4 Oktobrath miaraka amin'ny hetsika any New York, Philadelphia, Connecticut ary Boston. Ny SVGTA dia hanitatra ihany koa ny Road Shows mankany amin'ny tsenan'i Karaiba mandritra ny volana Novambra, izay ankalazaina eraky ny faritra ihany koa toy ny Caribbean Tourism M
Hong Kong Tourism Board ary mpiara-miasa amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka miaraka amina sehatra famandrihana fitsangatsanganana an-toerana hitadiavana mpandeha karana